▼ Feb5- Feb 12 (14)
ဒေါ်စုကို ကော့မှူးမြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်မှ ဦးတင်ရီမှ အထေ...
စိမ်းလန်းမြေ ပရဟိတ အခမဲ့ စာသင်ကျောင်း (ခေတ္တ) ၏ကျော...
အများမြင်ကွင်းတွင် Kissing နမ်းခြင်းကို FNG(Freedo...
နိုင်ငံရေးဇာတ်ခုံ အကယ်ဒမီပေးပွဲကြီးနှင့်ဒေါ်စု အကယ်...
ဒီနေ့ အမြင်မတော်တာလေးတွေ စုထားတယ်.:)
ဝန်ထမ်းများပျော်ဖို့လစာတိုးရေး အတည်ပြုပြီ
လက်တို့ ပြီးတော့ ပြောရအုံးမယ်
ကမ္ဘာလှည့်အမေရိကန် ဧည့်သည်တွေ ဘာကြိုက်
ကျွန်တော်တို့ ဘလော့ဂ် www.mgkyautkhae.blogspot.com...
ပြေတီဦးနှင့် နောက်အလှူရှင်တွေ သတိထားကြစေလို
ဖာ လုပ်မယ်/စတိတ်စင်ပေါ်မှာပြောတာ မြန်မာနိုင်ငံမှာပ...
ရေးသားသူအဖွဲ့= မောင်ကျောက်ခဲ အချိန်= 8:15 PM 20 ယောက် ဆွေးနွေးခဲ့တယ် Links to this post
ဆိုင်ရာကဏ္ဍ = စစ်ရေး
ဒေါ်စုကို ကော့မှူးမြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်မှ ဦးတင်ရီမှ အထောက်အထားခိုင်လုံစွာ ကန့်ကွက်ခဲ့ပြီ
ရေးသားသူအဖွဲ့= မောင်ကျောက်ခဲ အချိန်= 3:32 PM9ယောက် ဆွေးနွေးခဲ့တယ် Links to this post
စိမ်းလန်းမြေ ပရဟိတ အခမဲ့ စာသင်ကျောင်း (ခေတ္တ) ၏ကျောင်းဆောင်အချို့ ပြုပြင်နိုင်ရန် အလှူရှင်ဖိတ်ခေါ်ခြင်း
စိမ်းလန်းမြေ ပရဟိတ အခမဲ့စာသင်ကျောင်း တည်ဆောက်မည့် အစီအစဉ်၏ ပထမဆုံးခြေလှမ်းအဖြစ် ၂၀၁၂ _ ၂၀၁၃ ပညာသင်နှစ်အတွက် ဆယ်တန်းကျောင်းသား/ကျောင်းသူ အယောက်(၂၀)အား ရွေးချယ်ခေါ်ယူ၍ ဆယ်တန်းတစ်နှစ်လုံးစာ အတွက် တာဝန်ယူပေး သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။။ ထိုသို့ရွေးချယ်ခေါ်ယူ ပညာသင်စရိတ် ထောက်ပံ့ပေးရာတွင် ကျောင်းသား/ကျောင်းသူများ၏ ပညာရေးစရိတ်အဖြစ် တစ်ဦးလျှင် (၃၀၀၀၀/ိ) နှင့် နေထိုင်၊စားသောက်စရိတ်အတွက် တစ်ဦးလျှင် (၃၀၀၀၀/ိ) ထောက်ပံ့ပေးသွားရန် ရည်ရွယ်ထားပါသည်။။ ထိုသို့စီစဉ်ထားရာတွင် ကျောင်းသား/ ကျောင်းသူများ၏ ပညာသင်ကြားမှု၌ ဖိဖိစီးစီး၊ ထိထိရောက်ရောက် ရှိစေရေးအတွက် စိမ်းလန်းမြေ ပရဟိတအဖွဲ့မှ အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦး၏ အကူအညီဖြင့် ကျောင်းသားဆောင်စီစဉ်ပြီး ကျောင်းအိပ်၊ကျောင်းစား လေ့ကျင့်ပေးသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။။
ထိုကဲ့သို့ကျောင်းသားဆောင် စီစဉ်ရာတွင် မိထ္ထီလာစက်မှုဇုန်အနီးမှ စီးပွားရေးတက္ကသိုလ် ကျောင်းသားဆောင်ဝင်း တစ်ခုကို တစ်လလျှင် ကျပ်(၅၀၀၀၀/ိ) နှုန်းဖြင့် ငှားရမ်းထားရှိပြီးဖြစ်ပါသည်။။ အဆိုပါကျောင်းသားဆောင်ဝင်း အတွင်းရှိ အဆောင်အချို့နှင့် ရေချိုးခန်း၊ အိမ်သာ စသည်တို့တွင် အနည်းငယ် ပြုပြင်မွမ်းမံရန် လိုအပ်နေပါသဖြင့် ပြုပြင်နိုင်ရန် တစ်ဦးခြင်းသော်လည်းကောင်း၊ စေတနာရှင်များ စုပေါင်း၍ သော်လည်းကောင်း ကုသိုလ်ပါဝင်နိုင်ကြပါရန် လေးစားစွာ အသိပေး တင်ပြအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။။။
အိပ်ဆောင် (၂)ခု၊ ထမင်းစားဆောင်နှင့် စာကြည့်ဆောင်အဖြစ် အသုံးပြုနိုင်သော အဆောင်တစ်ခု၊ ရေချိုးကန်၊ အိမ်သာတို့ ပါဝင်သော စိမ်းလန်းမြေ အခမဲ့စာသင်ကျောင်းအဖြစ် စတင်မည့် နေရာ
ရေးသားသူအဖွဲ့= မောင်ကျောက်ခဲ အချိန်= 12:30 PM 1 ယောက် ဆွေးနွေးခဲ့တယ် Links to this post
ဒါ့အပြင်သမ္မတကြီးက ခုခံတိုက်ခိုက်ခြင်းကလွဲပြီး ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခြင်းမလုပ်ဖို့ အမိန့်ပေးထား လို့ တပ်မတော်အနေဖြင့် “
ရေးသားသူအဖွဲ့= မောင်ကျောက်ခဲ အချိန်= 12:58 AM 1 ယောက် ဆွေးနွေးခဲ့တယ် Links to this post
ဆိုင်ရာကဏ္ဍ = ပေးစာကဏ္ဍ
အများမြင်ကွင်းတွင် Kissing နမ်းခြင်းကို FNG(Freedom New Group)မှ အားပေးခဲ့
ကဲ..စာဖတ်သူ မြန်မာတို့ရေ..Freedom New Group ဆိုတဲ့ နေရာကတော့ မြန်မာသမီးရီးစား
ချစ်သူစုံတွဲတွေကို မြန်မာ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာ လွပ်လပ်စွာ နှုတ်ခမ်းချင်းတေ့စုပ် ယုယ နမ်းရှိူက်ခြင်း
(kissing) ကို အားပေးလိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်...။
၄င်းရဲ့ ဖေ့ဘုတ်လင့်မှာ သွားရောက်ကြည့်ရှူအားပေးသူကအားပေး ကန့်ကွက်သူက ကန့်ကွက်နိုင်ပါတယ်..။လင့်ခ်ကတော့ ဒီမှာ ကလစ် ပြီးသွားကြည့်ပါ..။
မြန်မာစာဖတ်ပရိသတ် အချိူ့ က တော့ အောက်ပါအတိုင်း သုံးသပ်ဝေဖန်ထားပါတယ်...။
Mla Sabe အားပေးတာကောင်းတယ်ဗျ... စ်ိတ်ချ နောက်ဆို တွေ့ရတော့မယ် နေရာတိုင်း အခု ဒီလောက် တင်းကြပ်တဲ့ ခေတ်မှာတောင် ဒီလိုဖြစ်နေတာ
Tun Aung Yes,I can do it ,very place ,every time and every body !!!!!!great idea!!!!!
Ye Htut ‎:) super like :D
Sou Wunna only freedom of kissing on public,,:D
Min Thu Han အော် အော် ..........
Yan Lin Aung toe tat khit hmi lar thaw Myanmar pyi.... :)
Pauk Soco ဘယျ နိုငျငံကပုံလဲဟငျ
H.t. Htut ဘယ်သူကိုမှလည်းမရည်ရွယ်ပါဘူး ဒါပေမယ့် ကျနော်တို့ က မြန်မာလေ ယဉ်ကျေးမှု့ လေးတော့ ထားသင့်ပါတယ် အဲ့လို့ ပြောဖို့ မကောင်းဘူးထင်ပါတရ်
ရေးသားသူအဖွဲ့= မောင်ကျောက်ခဲ အချိန်= 10:46 PM3ယောက် ဆွေးနွေးခဲ့တယ် Links to this post
နိုင်ငံရေးဇာတ်ခုံ အကယ်ဒမီပေးပွဲကြီးနှင့်ဒေါ်စု အကယ်ဒမီရပြီ
ဒီနေ့ မြန်မာနိုင်ငံ ၂၀၁၁-၂၀၁၂ အတွက် နိုင်ငံရေးအကယ်ဒမီဆုပေးပွဲတွင်..အကယ်ဒမီ၇၇ှိသူများ စာ၇င်းးး
အကောင်းဆုံး အမျိုးသမီး ဇာတ်ဆောင်ဆုကို..
The lady ကားနှင့် ကို့ကို ကျမကို ချာတိတ်လို့ မခေါ်နဲ့ ဇာတ်ကား မှ ဒေါ်စုကြည်
အကောင်းဆုံး အမျိုးသားဇာတ်ဆောင်ဆုကို ...
"ကျောင်းနံ၇ံမှ ဒေါင်းအလံ စိုက်မယ်"ဇာတ်ကားမှ မင်းကိုနိုင် (ခ) ခေါကြီး
အကောင်းဆုံး ဒါ၇ိုတ်တာ ဆုကို
"The lady " ဇာတ်ကားမှ ဒါ၇ိုတ်တာ Luc Besson
"ယိုးဒယားမှာေ၇ှာ့ဖြစ်သွားတယ်"ဇာတ်ကားမှ ဇာဂနာ
"လွှတ်မှ ဘိုကေ ညပ်မယ်" ဆိုတဲ့ ဇာတ်ကားမှ ကျော်သူ
အကောင်းဆုံး အမျိုးသမီးဇာတ်ပို့ဆုကို
"တို့လည်း တောင်းမယ် ဒေါ်စုလို"ဇာတ်ကားမှာ ဟာဂျီမ ဝေနှင်းပွင့်သုန်
အကောင်းဆုံး ၇ုပ်၇ှင်ထုတ်လုပ်ေ၇း ဆုကိုတော့
"ကိုကို့ ကျမကို ချာတိတ်လို့ မခေါ်နဲ့"ဇာတ်ကားမှ MyanmarExpress.net
အကောင်းဆုံး မီးထိုး မှန်ထိုး သွေးထိုး ဆုကို "Januray 11 မှာစစ်တပ်အာဏာပြန်သိမ်းမယ်" ဇာတ်ကားအား ပံ့ပိုးခဲ့သူ
ရေးသားသူအဖွဲ့= မောင်ကျောက်ခဲ အချိန်= 4:06 PM 8 ယောက် ဆွေးနွေးခဲ့တယ် Links to this post
ညီမလေးရယ်.ယူနီယံဂျက် အလံကြီးနဲ့ တော့ ဗိုလ်ချူပ် ကိုဖုံးမထားပါနဲ့နော်..သူတောင်အဲလိုမနေချင်လို့ လွပ်လပ်ရေးရအောင်လုပ်ခဲ့တာပါ
ညီမလေးရယ်...သွေးရင်းသားရင်းက မပြောပေမဲ့ ကိုတို့မျက်စိထဲမှာ အမြင်မတော်လို့ပါကွယ်.
ဒေါင်းက ခေါင်းရောက်နေပြီး ဗိုလ်ချူပ်က ဘယ်လိုလုပ် ဒူးကာ ရောက်နေတာပါလိမ့်
ဘုန်းဘုန်းကလည်း ပါးမှာ စတေကာကြီး နဲ့ ..မြင်ရတာ အချိူးကိုမပြေဘူး..ဘုန်းကြီးလိုမနေတတ်လို့ လူလို့ပြောတာ.တကယ် အချိူးကိုမပြေဘူး
ဘယ်နေရာလဲ.ဟုတ်လား...အဲဒါရန်ကူန် လိုင်းကား ပေါ်မှာဟ..နင်အမေလွှားတဲ့မှပဲ
ရေးသားသူအဖွဲ့= မောင်ကျောက်ခဲ အချိန်= 8:17 PM 12 ယောက် ဆွေးနွေးခဲ့တယ် Links to this post
ဆိုင်ရာကဏ္ဍ = ဓါတ်ပုံကဏ္ဍ
လာမည့်ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် နိုင်ငံသားများ၊ ၀န်ထမ်းများ၏ လုပ်ခ၊ လစာစရိတ်နှင့် ချီးမြင့်ငွေများကို မဖြစ်မနေ တိုးမြှင့်ပေးရေးအပါအ၀င် အချက် ( ၆ ) ချက်ကို ယနေ့ကျင်းပနေသော ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် အစည်းအဝေး၌ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးရွှေမန်းက အဆိုတစ်ရပ် တင်သွင်းပြောကြားခဲ့ကြောင်း သိရှိရပါသည် ။
အဆိုပါ အဆိုကိုတင်သွင်းရာတွင် သူရဦးရေရွှမန်းက ကိုယ့်လုပ်အားကို အရင်းတည်ပြီး ဆရာ၊ ဆရာမများက အချိန်ပို ကျူရှင်ပြရတာ၊ ဆရာဝန်၊ သူနာပြုက ပြင်ပဆေးခန်းများမှာ ညဉ့်နက်သန်းခေါင်အထိ ဆောင်ရွက်နေရတာ၊ ရငွေ၊ လုပ်ခ၊ လစာနှင့် မလုံလောက်လို့ ပြင်ပနိုင်ငံများသို့ ထွက်ခွာ အလုပ်လုပ်ရတာ၊ ထိုသို့ လုပ်ရာတွင်လည်း မိမိပညာနှင့် အဆင့်အတန်းကို နှိမ့်ချပြီး လုပ်နေရတာတွေ ရှိနေဆဲဖြစ်ကြောင်း ၊ ၀န်ထမ်းများ လုပ်ငန်းခွင် ပျော်စေရေး၊ ကျောင်းသား များ ကျောင်းနေ ပျော်စေရေး၊ တပ်မတော်သားများ တပ်နေပျော်စေရေးတို့အတွက် တာဝန်နှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့် အခွင့်အရေး၊ လုပ်ခ၊ လစာ၊ စရိတ်ချီးမြှင့်မှုများဟာ အဓိက သက်ဆိုင်နေတယ်ဆိုတာ သတိပြုရ မှာ ဖြစ်ပါကြောင်း ၊ အခြား အချို့ဌာနများမှ တာဝန်ထမ်းဆောင်နေကြတဲ့ ၀န်ထမ်းများကလည်း လုပ်ခ၊ လစာနည်းတာကို အကြောင်းပြုပြီး လက်ဖက်ရည်ဖိုး၊ အလှူငွေ၊ စာရွက်စာတမ်းကြေး တောင်းယူခြင်းနှင့် အခြားမလျော်ကန်သော လာဘ်ပေး၊ လာဘ်ယူဆန်သည့် ပြုမူဆောင်ရွက်ခြင်းများကို နေရာအနှံ့ ဌာနစုအများစုလိုလိုပင် တစ်ခုမဟုတ်တစ်ခု ပုံစံအမျိုးမျိုး ဖြစ်ပေါ်နေတာကို ၀မ်းနည်းစွာ ကြားသိနေရပါကြောင်း ဖြင့် ထည့်သွင်းပြောကြားသွားခဲ့ကြောင်း သိရှိရပါသည် ။
ရေးသားသူအဖွဲ့= မောင်ကျောက်ခဲ အချိန်= 6:45 PM 1 ယောက် ဆွေးနွေးခဲ့တယ် Links to this post
လူတစ်ယောက် ကို သတ်တော့ လူသတ်သမား
လူသိန်းပေါင်းများစွာကို သတ်တော့ သူရဲကောင်း
စာရေးဆရာတစ်ယောက်ရဲ့ စာမူကို ခိုးချတော့ စာခိုးသမား
စာရေးဆရာ ရာပါင်းများစွာရဲ့ စာမူကို ခိုးချတော့ စာမူပြုစုသူ
လူတစ်ယောက်ကို လိမ်တော့ လူလိမ်
လူစုလုဝေးကြီးကို လိမ်တော့ လူထုခေါင်းဆောင် ....တဲ့
ဘယ်သူပြောတာလဲ..မမေးနဲ့ ..စာဖတ်အားရှိတဲ့ လူသိတယ်..ဒီမိုကရေစီဘီုးအေကြီးလို့ဝင့်ကြွား
တတ်တဲ့ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံက လို့ သဲလွန်စပေးလိုက်မယ်။
တခါတခါ တော့လည်း ဝင်ဝင်ပြောမိတဲ့ပါးစပ်ကို ကိုယ်တိုင်မုန်းမိတယ်။ဘာလို့များ ဝင်ဝင်ပြောနေမိပါလိမ့် ဆိုပြီးပေါ့ဗျာ။ဒါပေမဲ့ ရှေ့မှာကိုးရိုးကားယားတွေ မြင်လာတော့လည်း ပြောမိပြန်ရောဗျာ။
ဒီနေ့တော့ ရေးချိန်လည်းမအားတာနဲ့ပုံလေးတွေပဲ တင်ပေးလိုက်ပါ့မယ်။
ကျွန်တော့ မြန်မာတွေဟာ ချက်ဆို နားခွက်က မီးတောက်ပြီးသားပါ။ကျွန်တော်တို့ ဘာကိုဆိုလိုချင်တယ်ဆိုတာကိုလေ။
ဓါတ်ပုံရိုက်ခံတာတောင် ကြည့်ကြအုံး....ဘယ်လောက်ခြားနားလဲဆိုတာ ဒီတစ်ကွက်နဲ့ တင်
ပြောတော့မယ်။myanmarexpress.net မှာလည်း တွေ့ပြီးပြီ..ကိုကို ကျမကို ချာတိတ် လို့ 
ကွင်းဝိုင်းပေးထားတဲ့ ပုံတွေကို မြင်ရတော့ 8888 ကို သွားသတိရတယ်
ရေးသားသူအဖွဲ့= မောင်ကျောက်ခဲ အချိန်= 1:51 PM 21 ယောက် ဆွေးနွေးခဲ့တယ် Links to this post
ဆိုင်ရာကဏ္ဍ = ဆင်ခြင်နိုင်ကြစေ, ဓါတ်ပုံကဏ္ဍ
ရေးသားသူအဖွဲ့= မောင်ကျောက်ခဲ အချိန်= 4:50 PM0ယောက် ဆွေးနွေးခဲ့တယ် Links to this post
ကျွန်တော်တို့ ဘလော့ဂ် www.mgkyautkhae.blogspot.com ကို
www.mgkyautkhae.com အဖြစ်ပြောင်းလဲ အသုံးပြုသွားတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျား
နာရေးကူညီမှူအသင်းသားများ ဆေးရုံအတွင်းမင်းမဲ့စရိုက်ဆန်ဆန် ကျူးလွန်မှူ(မော်လမြိုင်)
နာရေး ကူညီမှု အသင်းဆိုတာ ဘာလဲ ??
အဖွဲ့ အစည်းရဲ့  Main Purpose က ဘာလဲ ??
ဒီမေးခွန်းနှစ်ခုကို မေးလို့ ကျနော့်ကို .. လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှု မရှိတဲ့သူ .. ငတုံး တစ်ယောက် လို့ ထင်ကောင်းထင်ပေလိမ့်မည်. ဒါပေမဲ့ မနေ့က မော်လမြိုင်ဆေးရုံ Surgical Ward (Male) မှာ ဖြစ်ခဲ့တာ . စာဖတ်သူတို့
မြင်ရင် ကျနော် ဘာကြောင့်မေးလဲ သိပါလိမ့်မည်. နားလည်ပါလိမ့်မည်..
၃. ၂. ၂၀၁၂ မနက် ၈း၀၀ - ၄ . ၂ ၂၀၁၂ မနက် ၈း၀၀ ထိ Male Surgical Ward မှာ ကျနော် Duty ကျတယ် ။
ရှုပ်လိုက်တဲ့ နေ့တစ်နေ့ လို့ပဲ ဆိုရမလား မသိဘူး ။ တက်လိုက်တဲ့ လူနာက ညပိုင်းမှာ တင် 16 ယောက် ။ နောက် တော်တော်
များများကလဲ .. Ill Case ( အခြေအနေ မကောင်းသော ) တွေ ချည်းပဲ ။
ဒီလိုနဲ့ ည ၁၁ နာရီလောက်မှာ ပြသာနာက စရော ။ စစချင်း တင်တဲ့ လူနာက စက်ဘီးမှောက်တာ ။ စက်ဘီးမှောက်တယ်
ဆိုပေမဲ့ ပေါ့ပေါ့သေးသေးတော့ မပာုတ်ဘူးဗျ ။ နှာခေါင်း ပါးစပ် ဘယ်ဘက်ပါး နဲ့ မျက်စိ အားလုံး စုတ်သွားတယ် ။ GCS က တော့
၁၅ / ၁၅ ပါပဲ ။ ဒါပေမဲ့ Repair လုပ်ပေးရတာတော့ တော်တော် လက်ပေါက်ကပ်တယ် ။ အတွင်းပိုင်း ( subcutaneous ) ပါ ပြန်
repair လုပ်ပေးနေတုန်း ............
ပေါင် မြို့ က .. ဘုန်းကြီးပျံပွဲ .. အဲ့ဒီပွဲမှာ ယမ်းပေါက်ပီး . လူနာ ၂ ယောက် Admission တင်လာတယ် ။ ၁ ယောက်က အဲ့ဒီပွဲမှာ
နာရေးကူညီမှုအသင်း အမည်ခံ ( ပိာတကာရီ ) နာမည် နဲ့ အဖွဲ့ ထဲက တစ်ယောက်နဲ့ အပြင်လူ တစ်ယောက်ပါ ။
ပီာတကာရီ နာရေးကူညီမှုအသင်းက လူနာက ဘယ်ဘက်လက်မောင်းမှာ ယမ်းမှန်ပီး .. ရောက်လာပီး .. အပြင်လူ (ရွာခံ) ကတော့
မျက်နှာ (ပါး) မှာ ယမ်းစင်သွားတယ် ။ အဲ့ဒီရွာခံ က ဒဏ်ရာတော်တော်ပြင်းတယ် ။ Maxillary Sinus ထဲဝင်သွားတယ်ထင်တယ် ။ နှာခေါင်း ပါးစပ် အကုန် သွေးယိုနေတယ် ။ HB% ( သွေးစစ်ကြည့်တော့ ၇ mg% ) ပဲကျန်တယ် ။။
ဒီလိုနဲ့ ၁ ခန်းထဲ ရှိတဲ့ Dressing ခန်းမှာ လူနာ ၃ ယောက်နဲ့ ကျနော် ရယ် Assistant Surgeon ရယ် ဗျာများခဲ့တယ် ။ စက်ဘီးမှောက်တဲ့ လူနာကိုတော့ ချုပ်ပေးပြီး .. ယမ်းမှန်ခဲ့တဲ့ လူနာ ၂ ယောက်ကိုတော့ .. Betadine နဲ့ ဆေး.. Bandage စည်းပေးပီး မချုပ်ဘဲ ထားခဲ့တယ် ။ Open Dressing ပေါ့ (အထဲမှာ ယမ်းကျန်နေလို့ ချုပ်လို့လဲ မရပါဘူး ) ။ သွေးလိုရင် သွေးယူဖို့လဲ ကြိုပြင်ထားခဲ့တယ် ။နက်ဖြန်မှ Ortho Ward ကို Show မယ်ဆိုပီး Check Down ခဲ့အပြီး ကုတင်နေရာ မကျန်တော့လို့ ဘရန်ဒါ တွေမှာ ကုတင်အပိုတွေ ထိုးပေးပီး နေရာချပေးအပြီး အခြေအနေ ငြိမ်သက်သွားတယ်လို့ပဲ ဆိုရမယ်ပေါ့ ။ နာရီဝက်ခြားတစ်ခါလည်း အဲ့ဒီလူနာကို Traumatic Emphysema ရနေလို့ Air တွေကို Squeeze out လုပ်ပေးဖို့ အချိန်ခွဲပီး ည ၂ နာရီလောက်မှာ Duty Report ကို ဆက်ရေးခဲ့ပါတယ် .. အော် ကြားထဲမှာ ( ၁နာရီ ကျော်ကျော်လောက်) Perforation တစ်ယောက် ကို urgent ခွဲပေးရင်း .. First Assistant Surgeon Dr Ag Moe Htun က အဲ့ဒီ ယမ်း ထိတဲ့ လူနာတွေကို လာကြည့်ပေးခဲ့သေးတယ် ။
ဒီလိုနဲ့ မနက် ၃ နာရီ မှာ Duty Report တွေ အဆုံးသတ်အပီး အိပ်မယ် အလုပ် အသံတွေ ကြားတာနဲ့ ကျနော်လဲ .. New Admission များလားဆိုပီး .. သွား အကြည့် .. ခုနက (ပီာတကာရီ နာရေး ကူညီမှုအသင်းက ) လူ ၄၀ လောက် ဆေးရုံပေါ်တက်လာတယ် ။ ပီး သူတို့ လူနာ အနားသွားပီး .. လူနာကို ခွေးလို ထားရလား .. ဘာမှမလုပ်ပေးဘူးလားဆိုပီး .. ဆေးရုံ နံရံကို လက်သီးနဲ့ထိုး .. တံခါးကို ခြေထောက်နဲ့ကန် .. သောင်းကျန်းတော့တယ် ။ ဒီလိုနဲ့ ကျနော်က နေရာမရှိတော့ကြောင်း ပြောတော့ ဘာလို့ ချက်ချင်း မခွဲပေးတာလဲ . ပိုက်ဆံ မပေးလို့လား ဆိုပီး .. ၅၀၀ တန် လေးစည်းလောက် ထုတ်ပြပါတော့တယ်။ ဒီတော့ ကျနော်လည်း ခွဲပေးလို့ ရတဲ့ အခြေအနေမပာုတ်ကြောင်း . ခွဲစရာလည်း မလိုကြောင်း.. ပြောတော့ .. ဘာလို့ မချုပ်တာလဲဆိုပီး ထင်သောင်းကျန်းတယ် .. ပြီး မုဒုံ အခမဲ့ ဆေးခန်း ဆိုတဲ့ စာရွက်လေး ထုတ်ပြပီး .. ဒီလိုနေရာတွေ ရှိတယ် ခင်ဗျားတို့က ပိုက်ဆံကြည့်တာလား ဆိုပီး ကျနော့် မျက်နှာကို စာရွက်နဲ့ ပစ်ပေါက်ပြီး ထပ်ပြသာနာ ရှာတယ် ။
ရေးသားသူအဖွဲ့= မောင်ကျောက်ခဲ အချိန်= 3:31 PM 8 ယောက် ဆွေးနွေးခဲ့တယ် Links to this post
လှူဒါန်းတတ်ကြပါစေ (မင်းအုပ်စိုး၊ သရပါ မဂ္ဂဇင်း ဇန်နဝါရီ ၂ဝ၁၂)
ဒီစာကိုရေးဖို့ အကြိမ်ကြိမ်စဉ်းစားခဲ့ရပါတယ်။ မရေးတော့ဘူးလို့လည်း ခဏခဏဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။
မရေးဖြစ်အောင်လည်းကိုယ့်စိတ်ကို ထိန်းထား ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း ဘယ်လောက်ထိန်းထိန်း
ကျွန်တော့်ရဲ့ သန္ဓေဗီဇကိုက မကောင်းတဲ့အတွက် ဘယ်လို မှ ထိန်းမရတော့ဘဲ ဒီစာကို ရေးဖြစ်သွားတာပါ။ ဒီစာကိုရေးဖြစ်တဲ့အတွက် ရှိပြီးသားမိတ်ဆွေတွေ ဆုံးရှုံးကုန်မှာဖြစ်သလို မိတ်ဆွေအဖြစ် မရှိသေးတဲ့ သူတွေလည်း ရန်သူအဖြစ်ရောက်သွားမှာသေချာပါတယ်။ နဂိုကတည်းက ကျွန်တော့်
အပေါ် ခါးခါး သီးသီးမုန်း နေတဲ့လူတွေကတော့ မျက်နှာကို မကြည့်ချင်လောက်အောင် အသံကိုမကြားချင် လောက်အောင် ရွံရှာစက်ဆုပ်သွားမှာ သေချာပါတယ်။
ဘာအကြောင်းကြောင့် အဲ့ဒီလိုဖြစ်သွားရမှာလဲလို့ မေးခဲ့ရင်ကျွန်တော်ရေးမယ့်အကြောင်း က မြန်မာတစ်ပြည်လုံးက ပရိသတ်တွေသည်းသည်းလှုပ်ချစ်နေကြတဲ့ အားပေးနေကြတဲ့ နိုင်ငံ ကျော်အနုပညာ
ရှင် ပြေတီဦးနဲ့ အိန္ဒြာကျော်ဇင် တို့ရဲ့ အကြောင်းပါ။ အထူးသဖြင့် ပြေတီဦးပညာရေးဖောင်ဒေးရှင်းအကြောင်းပါ။
ဒီစာကို ဖတ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာ တော်တော်များများက ကျွန်တော့်အပေါ် မှတ်ချက်ချကြပါ လိမ့်မယ်။
ပြေတီဦးရဲ့ အောင်မြင်ကျော်ကြားမှုကို ကျွန်တော် က မနာလိုလိ်ု့ မရှုစိမ့်လို့ မုဒိတာမပွားနိုင်လို့
ဒီလိုမျိုးရေးတာလို့ သတ်မှတ်မှာ သေချာ ပါတယ်။ သူတို့ဇနီးမောင်နှံအပေါ်မှာအချစ်ကြီး ချစ်နေတဲ့ပရိသတ် တွေလည်း ကျွန်တော့်အပေါ် အမုန်းကြီးမုန်းသွားမှာ သေချာပါတယ်။
တကယ်တော့ ပြေတီဦးနဲ့ကျွန်တော်ဟာ အင်မတန်မှ ချစ်ခင်ရင်နှီးတဲ့သူငယ်ချင်းအရင်း ကြီးတွေပါပဲ။
သုညအောက် ရောက်နေတဲ့ ဘဝတွေကိုအတူတူဖြတ်သန်းရင်း လည်ပင်းဖက် ပေါင်းလာကြတဲ့
ညီအစ်ကို သူငယ်ချင်းတွေပါ။ အခုအချိန်ထိလည်း သူနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ကြားမှာ အမုန်း ပွားစရာတစ်စက်မှမရှိသလို ပြဿနာလည်း နည်းနည်းလေးတောင် မရှိပါဘူး။ ဒါဆိုရင် ဒီစာမရေးဘဲ မင်းတို့သူငယ်ချင်း
အချင်းချင်း လူချင်းတွေ့ပြီးပြောလိုက်ပါလားလို့ စာဖတ် ပရိသတ်ကြီးကပြောချင်ကောင်းပြောချင်ကြပါ
လိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် ဘာကြောင့် ကျွန်တော်ဒီစာကို ရေးရသလဲ ဆိုရင်...
ဒီစာထဲမှာပါတဲ့အကြောင်းအရာဟာ ပြေတီဦးတစ်ယောက်တည်းနဲ့ ပတ်သက်နေတာ မဟုတ်ပါဘူး။
မြန်မာနိုင်ငံ ရဲ့ စာနယ်ဇင်းလောကမှာ အင်မတန်မှကိုထိပ်ဆုံးရောက်နေတဲ့ ဆရာ ဦးဝင်းငြိမ်းနဲ့ ဆရာဦးမြတ်ခိုင် တို့ နှစ်ယောက်လည်း ပါဝင်ပတ်သက်နေလို့ပါ။
သူတို့နှစ်ယောက်တင်မကသေးပါဘူး။ ရုပ်ရှင်နဲ့ဗီဒီယိုလောကမှာ အင်မတန်မှကို အောင်မြင်ကျော်ကြားပြီး
ဇာတ်ကားကောင်း ပေါင်းများစွာ တပည့်တပန်း ပေါင်းများစွာကိုရိုက်ကူးမွေးထုတ်ခဲ့တဲ့ နိုင်ငံကျော်စူပါ
ဒါရိုက်တာ မောင်မျိုးမင်း(ရင်တွင်းဖြစ်) လည်း ပါနေလို့ပါ။
ဒါတင်မကသေးပါဘူး။ရုပ်ရှင်နဲ့ဗီဒီယိုထုတ်လုပ်သူလောကမှာ အင်မတန်မှ လုပ်သက်ရှည်တဲ့အတွေ့အကြုံ
ပေါင်း မြောက်များစွာ ရှိတဲ့ မင်းသားပေါင်းများစွာနဲ့အလုပ်လုပ်ခဲ့တဲ့ ထုတ်လုပ်သူ ကိုဝင်းကြည်လည်း ပါဝင်နေလို့ပါ။
အဲဒီတော့ ဒီအကြောင်းအရာတွေကို စာတစ်စောင်ပေတစ်ဖွဲ့ မရေးဘဲသူတို့တစ်ယောက် ချင်းစီကို သွားပြီး စကားတွေပြောဆွေးနွေးငြင်းခုံနေကြမယ်ဆိုရင် သူတို့ရောကျွန်တော်ပါ အချိန် ကုန်အလုပ်ပျက် ပါတယ်။
အဲဒါကြောင့် ဒီစာစုကို မိတ်ဆွေအပျက်ခံ ရန်သူအပွားခံပြီး ကျွန်တော်ရေးလိုက်တာပါ။
ဒီစာစုကို ရေးဖြစ်စေတဲ့ နောက်တစ်ချက်ကတော့ အခုအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ တိုင်းပြည် ဟာ အပြောင်းအလဲ
တွေများစွာနဲ့ အကောင်းဘတ်ကိုဦးတည်နေတဲ့ အချိန်အခါ ဖြစ်ပါတယ်။ အဖွဲ့အစည်း တွေ၊ ပါတီတွေ၊ ဖောင်ဒေးရှင်းတွေကို ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခွင့်ပေးနေတဲ့ အချိန်လည်း ဖြစ် ပါတယ်။ အဲဒီတော့ ဖောင်ဒေးရှင်းတွေဆို
တာ သိပ်မကြာခင်ကာလမှာ တစ်ခုပြီးတစ်ခုထပ်ပေါ် လာတော့မှာပါ။
အဲဒီ ပေါ်လာတဲ့ ဖောင်ဒေးရှင်းတွေက နိုင်ငံတော်ရဲ့မျိုးဆက်လူငယ်တွေရဲ့ ဘ၀ ကို မြှင့်တင်ပေးဖို့ ဆိုတဲ့စိတ်
နဲ့ ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်လို့ အခုပြေတီဦး ဦးဆောင်ပြီး နိုင်ငံကျော် စာနယ်ဇင်းဆရာကြီးများ ဒါရိုက်တာကြီးများ လုပ်ကြတဲ့ပွဲမျိုးကိုအမှန်လို့ထင်ပြီး ဆက်လုပ်နေကြမယ်ဆို ရင်....
ရေးသားသူအဖွဲ့= မောင်ကျောက်ခဲ အချိန်= 12:30 PM 15 ယောက် ဆွေးနွေးခဲ့တယ် Links to this post
ဆိုင်ရာကဏ္ဍ = ဆင်ခြင်နိုင်ကြစေ, ပေးစာကဏ္ဍ
ဖာ လုပ်မယ်/စတိတ်စင်ပေါ်မှာပြောတာ မြန်မာနိုင်ငံမှာပဲရှိတယ်
ဘာတွေလုပ်မှာလဲ....ဘာ ..ဘာ ..ဘာတွေလုပ်
အဲဒီလိုပြောတာ ဘယ်မှာလဲ...မမေးနဲ့ ..ဗုဒ္ဒဘာသာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ဟိရီသြတ္တပ ရှိလှတဲ့
မြန်မာ အမျိူးသမီး ၂ ဦးက ပရိသတ် ထောင်ကျော်ရှေ့မှာ သီချင်းလုပ်ဆိုသွားတာပါ
ဆိုတဲ့လူက ဗုဒ္ဒဘာသာ မြန်မာအမျိူးသမီး
အားပေးတဲ့ ပရိသတ်က ဗုဒ္ဒဘာသာ မြန်မာများ
ဆိုတဲ့သီချင်းက ဖာ လုပ်မယ်ဆိုတဲ့သီချင်း...
ကဲ အောက်တန်းစား ဗုဒ္ဒဘာသာတွေနေတဲ့ အောက်တန်းစားနိုင်ငံတစ်ခု မကြာခင်
နားထောင်ကြည့်ကြတော့ဗျိူ့ ......ဖာ လုပ်မယ်တဲ့...
အဖ ဗိုလ်ချူပ် ကို မြင်ချင်သေး
ရေးသားသူအဖွဲ့= မောင်ကျောက်ခဲ အချိန်= 2:09 AM 17 ယောက် ဆွေးနွေးခဲ့တယ် Links to this post
ဆိုင်ရာကဏ္ဍ = Video ဖိုင်, ဆင်ခြင်နိုင်ကြစေ